fanalefahana sy famatsiana teknolojia famatsiana sy famatsiana
HLQ Hisy rafitra fanamafisam-peo dia rafitra ampiana soatoavina izay afaka miditra mivantana amin'ny sela famokarana, mampihena ny fako, fandaniam-bola ary tsy ilàna fanilo. Ireo rafitra dia azo raikitra ho fanaraha-maso ny manual, semi-automated ary amin'ny fomba rehetra. Ny rafi-panondranana sy famandrihana HLQ dia manome matetika ireo rantsana madio sy leakoka ho an'ny faritra marobe izay tafiditra ao anatin'ireo andalana solika, mpivarotra hafanana, mpaninjara entona, manisy tahiry, fananganana karbônina, sy ny maro hafa.
Fitsipika momba ny famonoana sy fametahana induction
Fitaovana famenon-tsakafo famenonam-bokatra
Ny metaly famenoana an'ny induction dia afaka tonga amin'ny endrika isan-karazany, endrika, habe ary halavola arakaraka ny fampiasana azy ireo. Ny boribory, peratra misy preformed, paste, tariby ary mpanendaka mialoha dia vitsivitsy fotsiny amin'ny endrika sy endrika alloy izay mety ho hita.
Ny fahatsiarovana ny fananganana induction dia voaporofo fa fanampiana sarobidy amin'ny dingana fampidirana noho ny antony maro. Ny lohatenin'ny haingam-pandeha haingana sy ny fifehezana hafanana marina dia manome ny mety hisian'ny fametrahana avy any an-toerana ny singa matanjaka avo lenta nefa tsy manova firy ny fananana. Izany koa dia mamela ny fanoratana ny fitaovana sarotra toy ny aluminium sy ny fandaharana, ny fitrandrahana multi-alloy ary ny fametrahana ny vira-piraisan'ny fifandraisana akaiky.
Ny fantsom-baravarana amin'ny fangatahana mamoaka sy ny fivarotana dia mora apetraka amin'ny fomba famokarana, mamela ny fandaharana stratejika ny fitaovana ao amin'ny tsipika fivoriambe, ary raha ilaina, dia ny fandroahana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra. Matetika ny fanosanana indostrian'ny fametrahana sy ny fametrahana dia mamela ny fampihenana ny fangatahana anjara amin'ny fitakiana, miaraka amin'ny fangatahana kely ny fiakarana mampitombo ny androm-piainana sy ny fihazonana ny marina amin'ny firindrana ireo singa tokony ho tafiditra. Koa satria tsy mila mitantana ny loharanom-panafahana ny induction ny mpandraharaha dia avela malalaka ny tanana roa mba hanomanana fivoriambe hiditra.
HLQ Fitaovana fanosihosena entana manome ny kalitao, tsy miovaova, alalàn'ny fifangaroana azo ampiasaina ary fitaovana fanovana haingana ho an'ny filàna famokarana samihafa. Ny tsipika Radyne fanondranana entana sy famokarana dia manome vahaolana fenitra amin'ny fanetren-tena:
Ary maro kokoa…
Sokajy FAQ, Technologies Tags haavo matetika, indostrian'ny brazer, induction brazing, induction brazing system copper, induction brazing machine, mpanamboatra brazing mpanamboatra, rafitra fanetren-tena, vondron-trano fandrobohana, induction soldering, MF miteraka, Masinina mandroba MF, fandefasana radio matetika, fampandehanana radio matetika, RF induction Post Fikarohana